Ndị na-emepụta ọkọlọtọ ọkọlọtọ pụrụ iche - China Pụrụ iche ọkọlọtọ osisi Suppliers & Factory
Mgbasa mgbasa ozi Magnum Banner, ọkọlọtọ pụrụ iche na nke mara mma nke nwere ụdị iko mmanya, dị mfe ịgbakọta na ịkwatu, dị fechaa na obere ibu, otu n'ime ihe ngosi kachasị ọnụ maka akara ngosi na mgbasa ozi. Ma n'ime ma ọ bụ n'èzí n'ụbọchị ikuku na-efe efe, ọkọlọtọ ọkọlọtọ Magnum ga-eguzoro ogologo ma dọta mmasị.
Akpọrọ ọkọlọtọ W n'ụdị ebili mmiri mara mma ya. Ntụtụ ntakịrị na okporo osisi na-eme ka a mara na ọkọlọtọ na-egosipụta mgbe niile yana ọ dị mma maka ịzụ ahịa nkwado. Ogwe osisi sitere na ihe mejupụtara carbon nwere ike ikwe gị ogologo oge iji oge. Dị na nha 2.
Ọkọlọtọ U bụ ụdị pụrụ iche nwere nnukwu ebe ngosi. Ị nwere ike bipụta otu ma ọ bụ akụkụ abụọ iji gosipụta ozi gị. Emere site na ihe mejupụtara carbon nwere ike ekwe gị nkwa ogologo iji oge. Ọ bụ ezigbo nhọrọ ịgbasa ozi ma ọ bụ akara gị.
Ọkọlọtọ R bụ otu n'ime ụdị pụrụ iche nke nwere ọkọlọtọ akwa nwere agba agba. Kwesịrị ekwesị maka ngosi izugbe, ogige ụgbọ ala na mmemme ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí. Ogwe osisi sitere na ihe mejupụtara carbon nwere ike ikwe gị ogologo oge iji oge. Nha atọ dị.
Ọkọlọtọ Pin-point bụ nnukwu ihe nrịbama enwere ike ibugharị nwere ọdịdị pụrụ iche dị ka akara ngosi na maapụ, nke a na-ejikarị eme mmemme, oghere mkpọsa, ọrụ nkwalite, ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ ịdọrọ uche onye ahịa.
Ọ bụ ezigbo ngwọta maka ndị na-akwụsị okporo ụzọ ụzọ, nkwado na ngosipụta mgbasa ozi ma n'ime ụlọ na n'èzí! Kaa akara n'ọkpụkpụ gị wee jiri ọkọlọtọ ebipụtara nke ọma mara gị.
Ọkọlọtọ P bụ ihe pụrụ iche nwere ọdịdị ọkara okirikiri yana ọkọlọtọ akwa nwere esemokwu. Ị nwere ike bipụta otu ma ọ bụ akụkụ abụọ iji gosipụta ozi gị. Emere site na ihe mejupụtara carbon nwere ike ekwe gị nkwa ogologo iji oge. Kwesịrị ekwesị maka ngosi izugbe, ogige ụgbọ ala na mmemme ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí.
Ọkọlọtọ ọkọlọtọ pụrụ iche na mara mma na-agbanye axis ma gosipụta ozi gị nke ọma, ọ ga-enyere aka mmemme gị ma dọta ndị ahịa. Ụdị anọ maka nhọrọ gị.